simba rekuchengetedza, catalysis, analytical chemistry, mechanics, adsorption, biology, microelectronics, sensor, nezvimwewo. Nb2AlC zvedongo poda inogona kushandiswa mukubhururuka, muchadenga, indasitiri yemagetsi uye indasitiri yenyukireya.
Mo3AlC2 inhengo yeiyo vdW MAX yakarongedzwa zvinhu system. Zvakafanana ne graphite uye MoS2, iyo MAX chikamu yakasungwa, uye yakajairwa fomati ndeye Mn + 1AXn, (MAX), uko n = 1 ~ 3, M ndiyo yekutanga shanduko yesimbi, A ndiyo isiri metallic element, uye X kabhoni uye / kana nitrogen. Mune ino chaiyo kesi, M = Mo, A = Al, X = C, n = 2.
Titanium-aluminium carbide (TI-Al carbide) imhando nyowani yetatu-nhurikidzwa dhizaini zvedongo zvinhu, izvo zvave zvichinyanya kunetsekana nevasayendisiti vezvinhu uye vefizikisi nekuda kwenzvimbo dzayo dzakasiyana.
MAX chikamu ceramics (kusanganisira titanium yesilicon carbide, Ti3AlC2 zvinhu, nezvimwewo) rudzi rutsva rwekugadzirisa conductive zvedongo zvinhu zvakakwezva kutarisisa. Aya maceramics ane anopfuura makumi matanhatu marudzi eaternary carbides kana nitrides.
Ti2SnC ceramics irudzi rutsva rwechimiro ceramics ine yakasarudzika dhizaini dhizaini inogona kugadzirwa. Iyo ine zvese zvakanakisa zvivakwa zvesimbi uye zvedongo. Zvakafanana nesimbi, ine zvakanakira kunaka kwemagetsi uye kupisa kwekushisa, machinability, yakanyanya kukuvara kushivirira uye kupisa kwemhepo kushamisika.
Mumakore achangopfuura, musayendisiti wezvinhu akagadzira kirasi nyowani ye312 mhando zvedongo zvinhu, zvakajairika fomura yeM3XZ2, pakati pavo, iyo M ndeimwe kana akati wandei ekuchinja kwesimbi zvinhu (senge Ti, V), X imwe kana kupfuura yeaya anotevera akakosha eboka chinhu, anoverengeka III, IV makuru eboka zvinhu (senge Al Ge Si), Z chimwe kana zvimwe zvisingaenzaniswi zvinhu (senge CNB, nezvimwewo),